Chrome 92 inosvika pamwe nekuvandudzwa mukuonekwa kwe phishing, kupatsanurwa kwenzvimbo uye zvimwe | Kubva kuLinux
Chrome 92 inosvika pamwe nekuvandudzwa mukuonekwa kwe phishing, kupatsanurwa kwenzvimbo uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeGoogle Chrome 92 yakaziviswa iyo inomira kunze ikozvino inosanganisira a kuona phishing kusvika makumi mashanu nekukurumidza kupfuura yazvino vhezheni yakagadzikana yebrowser.
Uye ndeyekuti nekukasira kuona nzvimbo dzehunyanzvi, kunatsiridzwa mukugadzirwa kwemifananidzo tekinoroji kunogona kucherechedzwa Chrome yaishandisa kuenzanisa iwo mavara profiles eakavhurwa mawebhusaiti pamwe nekuunganidzwa kwemasaini ane chekuita neye phishing kumhara mapeji
Ndinoreva Chrome inoongorora seti yemasaini nezve iyo peji kuti ione kana ichienderana neayo enzvimbo dzekubiridzira. Kuti uite izvi, Chrome inofanidza chimiro chemavara chepeji yakashanyirwa, ndiko kuti, huwandu uye kuwanda kwemavara aripo pane peji, aine iwo mavara profiles emapeji aripo. Semuenzaniso, mumufananidzo uri pazasi, tinogona kuona kuti mavara acho anonyanya kuve eorenji, achiteverwa negirinhi uyezve nekuratidzwa kwepepuru.
Zvakare, mune iyi vhezheni itsva ye Chrome 92 inowedzera kusarudzika kwenzvimbo. Izvi zvinoshanda kunyanya kune zvinowedzera kuitira kuti vatadze kugovana maitiro neumwe neumwe. Mune vhezheni nyowani, kupatsanurwa kwemabrowser ekuwedzera-ons kunoitwa nekubvisa yega yega kuita kwakasiyana, izvo zvakaita kuti zvikwanise kugadzira chimwe chipingamupinyi chekudzivirira kubva kune dzakaipa zvinowedzera.
Nezve izvo zvakasarudzika shanduko kudesktop vhezheni, zvinoratidzwa izvo iyo yekutsvaga mufananidzo sarudzo (icho chinhu «Tsvaga mufananidzo» mumenu yemamiriro) yatama kushandisa Google Lens sevhisi pachinzvimbo cheinowanzo tsvaga injini yeGoogle. Nekudzvanya bhatani rinoenderana mumenu yemamiriro, mushandisi anozotungamirwa kune yakasarudzika webhu kunyorera.
kunze kwaizvozvo zvinongedzo zvekushanyira nhoroondo zvakavanzwa muiyo incognito mode interface (Izvo zvinongedzo hazvibatsiri, nekuti zvakatungamira kuvhurwa kwe stub neruzivo kuti nhoroondo haina kuunganidzwa).
Uye vakawedzera mirairo mitsva inoparadzaniswa nekutaipa mubara rekero. Semuenzaniso, kuti utore bhatani rinokurumidza pane peji kuti utarise password uye plug-in chengetedzo, ingo nyora "chengetedzo control" uye enda kune chengetedzo uye sync marongero: "gadzirisa kuchengetedzeka marongero" uye "gadzirisa sync".
Kune rimwe divi, zvinomira pachena kuti danho rekutanga rakaitwa kudzikisa zvirimo zvemusoro we "HTTP Mushandisi-Mumiririri", yambiro dzechinyakare navigator.userAgent, navigator.appVersion, uye navigator.platform izvozvi zviratidzwa pane Nyaya dzeMibvunzo yeDevTools.
Uye zvakare, faira rinobata API rakapihwa kunyoresa mawebhu kunyorera sevanobata mafaera. Semuenzaniso, webhu application inomhanya muPWA (inofambira mberi webhu kunyorera) modhi ine zvinyorwa zvemavara inogona kunyoreswa se ".txt" faira inobata uye inogona kuzoshandiswa mune iyo system faira maneja kuvhura zvinyorwa zvemavara.
Zvakare kuwedzerwa nekwanisi yekushandura zita uye chiratidzo chePWA application (inofambira mberi webhu kunyorera).
Uye kune mashoma mashoma nhamba yemafomu ewebhu anosanganisirwa nekupinda kero kana kiredhiti kadhi nhamba, sekuyedza, kuratidzwa kweakazvigadzirira kurudziro kuchadzimwa.
Maitiro ekuisa Google Chrome 92 paLinux?
Kana iwe uchifarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yeichi webhurawuza uye iwe uchiri usina iyo yakaiswa, unogona kurodha mugadziri uyo unopihwa mumadhora uye rpm mapakeji pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Chrome 92 inosvika pamwe nekuvandudzwa mukuonekwa kwe phishing, kupatsanurwa kwenzvimbo uye nezvimwe
Musique: Yakagadziridzwa uye imwe mimhanzi inoridza yeGNU / Linux
Bullet, CronShot uye Cyclops: Yahoo Vhura Sosi - Chikamu 2